Mushure merunyerekupe: Ungade here kuramba uchitarisa kuMacBook ine Touch Bar? | Ndinobva mac
Mushure merunyerekupe: Ungade here kuramba uchitarisa kuMacBook ine Kubata Bhawa?
Kudzoka muna 2016, chaive chinhu chitsva chisingaenzaniswi cheApple chakauya pamusika uye chaigona kuchinja nzira iyo vanhu vangashandisa nayo komputa. Iyo Touch Bar yakaunzwa pamwe chete nezvimwe zvitsva izvo mukupedzisira zvakaratidza kuti hazvina kushanda nemazvo kana kuti ivo havana kana kugamuchirwa kwavanofanirwa. Tiri kutaura nezve butterfly keyboard, iyo ESC kiyi kana iyo chaiyo bha pachayo kuve neyechipiri zviito zvichienderana nechirongwa chiri kuitwa. Zvino runyerekupe runoratidza kuti Kubata Bhawa kunogona kuve nemazuva ayo akaverengwa.
1 Iyo nyowani 14-inch uye 16-inch MacBook Pros ikozvino inoratidza kuti vanogona kusazowedzera iyo Kubata Bhawa.
2 Zvinotonyanya kuitika kuti vanhu vashoma vacharasikirwa neiri chaiyo bar kana ikapedzisira yabviswa
Iyo nyowani 14-inch uye 16-inch MacBook Pros ikozvino inoratidza kuti vanogona kusazowedzera iyo Kubata Bhawa.
Sezvatakakuudza kare, Ratidza Kugovera Chain maAdvista, inoratidza mune mutsva mushumo wakaburitswa munhau senge 9To5Mac kuti anotevera Apple makomputa angauye asina iyi Bata Bhawa yakawedzerwa muna Gumiguru 2016 y ikozvino paApple makomputa aigona zvino kusvika kumagumo. Makore mashanu gare gare zvinoita sekunge haina kunge yakadzika iyo yaitarisirwa nevagadziri vayo. Iyo Kubata Bar yaiitirwa kurerutsa basa revaya vashandisi veMacBook, asi chokwadi ndechekuti haina kunyanyo shandiswa.
Ichokwadi icho Zvinoenderana nezvakawanda pamashandisiro aunozviita. Hazvina kufanana kuti ugare uchishanda neExcel semuenzaniso, umo iyo Bata Bhawa rinozvidzivirira chaizvo, pane kuzviita ne Photoshop, iyo inowanzo shandisa tablet ye digitizing iyo inoita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo uye uko iyo Touch Bar isingavandudze shandisa kana zvisiri, zvinogona kutadzisa kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Ndosaka ndichigara ndichiti zvinoenderana nekushandisa kwauchapa. Izvo zvakakosha. Asi ichokwadi kuti parizvino, ongororo dzandiri kuona paInternet dzese dziri kutaura chinhu chimwe chete: Mushandisi haadi iyo Bata Bata.
Mune imwe chinyorwa yakanyorwa nemumwe wevatinoshanda navo, zvinonzi Apple payakaunza iyi bhawa zvinoita sekunge yaigadzira chishuwo chisipo kusvika panguva iyoyo. Iyo Kubata Bar haina kunyanya kukosha, uye kana zano racho raizogona kugadzirisa uye kuita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi, zvinoita sekunge zvaitsvakwa hazvina kuzadzikiswa.
Zvinotonyanya kuitika kuti vanhu vashoma vacharasikirwa neiri chaiyo bar kana ikapedzisira yabviswa
Zviri zvakare kuti kuiswa kweiyi chaiyo bar kwakaunzwa pamwe nedzimwe shanduko muMacBook izvo zvakakonzera kuti "vanhu" varasikirwe kuvimba neApple. Kubviswa kwekiyi yeESC, iyo bhatafuru khibhodi iyo yakashatiswa neruzhinji, yakashoropodzwa kunyangwe neApple pachayo. Kana iwe ukawedzera kune izvi kuti iwe unowedzera nyowani nyowani bhaa iyo pabepa zvinoita sekunge ichapa asi asi chokwadi chiri chakanyanya kushata, Ipapo zvinopera kutora chigumbu uye hautombodi kuzviona.
Kushandisa mari paMacBook Pro muna2016 zvinoita kunge kwanga kusiri kwakanyanya kwesarudzo uye kunyangwe zvakadaro, akawanda mayuniti akatengeswa izvo izvozvi zvichave nhoroondo uye nekutenda kunaka kwazvichave. Ese aya matsva maficha abviswa, kunze kweiyo imwe chete, iyo Bata Bhawa. Izvi zvinoreva kuti yakawanda nzvimbo yekutamba nayo uye zvakare kana iwe ukabvisa iyo chaiyo bar iwe unofanirwa kuita kuti chigadzirwa chive chakachipa nekuti chinoshaikwa iyo tekinoroji inodhura uye isingabatsiri.
Ini ndinofunga vashoma vanhu vacharasikirwa neTouch Bar kana pakupedzisira Apple ikabvisa iyo mumamodeli matsva, Tichifunga kuti ibhawa risinganyatso kubatsira kuti ribudirire kana kuti ribudirire. Inguva chete ndiyo ichataura asi Apple inofanirwa kuteerera tsvagiridzo dziri kuitwa maererano nenyaya iyi uye teerera kune vashandisi pavanokumbira kuti ibviswe kubva pamakomputa.
Tichazviona zvichidonha zvichitevera pasina kupokana. Kana vakaibvisa pachangu, zvirinani kuti ndichave ndichifara zvakada kufanana neapo vakabvisa kabutufuru kiibhodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mushure merunyerekupe: Ungade here kuramba uchitarisa kuMacBook ine Kubata Bhawa?
Ndinovenga zvakadii murombo wekubata bhaa ... zvisina basa, munoti, ini ndinofunga chinyorwa chinoyedza kupwanya tekinoroji iyi pasina chero nzira, nekuda kwekufungidzira kuti mamodheru matsva haauye nayo uye vanoda kutsigira kusavapo kwayo ...
Ini ndinofunga vane mashandisirwo mashoma, uye kunyaradzwa kweyemuviri keyboard yemakiyi ebasa kwakakosha, tisingataure kuti inowedzera mutengo wechigadzirwa, inotarisirwa 16-macbook pro ine M2 processor, inofanirwa kuve nehupenyu hwese hwekhibhodi. .
Apple TV + inowana mazita gumi neshanu kubva kuHollywood Critics Association
Chiratidziro chitsva chaJon Stewart chinotanga kutora vhiki rinouya